Iinkqubo zobuchule beFotoshop Blur | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iindlela zokufiphaza ngobuchule kunye Photoshop Indawo yokudibanisa gqamisa izinto kumfanekiso okwinkqubo yokuhlela ngenkqubo yokufota kwakhona ngokugqwesa. Qalisa ukusebenza ukufiphala kwe Photoshop a indlela ngqo kunye nobungcali ukulawula ukuphucula iziphumo zeefoto zakho.
El ukufiphala kwe Photoshop Ingasetyenziselwa izinto ezininzi: yenza umbono, indawo ekunyamalala kuyo, zoba into ethile, ufihle iinxalenye zomfanekiso, kunye nazo zonke iintlobo zokuphinda ubambe kwakhona ezinokusivumela ukuba sifezekise ezinye iifoto zobungcali nezinomtsalane. Funda okungakumbi malunga nokufakwa kwakhona kweefoto ngale nto isikhundla ibalulekile.
Ukufiphaza yinto esisiseko xa sifuna fumana ubunzulu kumfanekiso kwaye unike ukubaluleka okukhulu kwizinto ekugxilwe kuzo, enkosi koku kufiphala amehlo ethu ajonge ukujonga kwabo kwiindawo ezithile zomfanekiso, ngaloo ndlela kufezekiswa i ukufunda okungafaniyo yokufota.
Singasebenzisa ukufiphala ukwenza nika ukubaluleka kwinxalenye ethile kwaye ichaneke kakhulu kumfanekiso onje phawula ukujonga, intyatyambo kunye nayo nayiphi na into ngokokubona kwethu ineqondo elikhulu lokubaluleka kulwakhiwo. Unokusebenzisa ukufiphala ukuya fihla ubuni bomntu, Le yinto esetyenziswa kakhulu kwiinethiwekhi zentlalo ngabazali abafaka iifoto zabantwana babo abancinci. Ukuba ufuna ukufunda ubuchule obunomdla, qhubeka ufunda oku isikhundla.
Siza kufunda oku kulandelayo kwi Ifotohop:
aplicar ukufiphala ngokubanzi kumfanekiso
Ukufiphala okuthile kummandla
Fumana ubunzulu usebenzisa ukufiphala
Fihla isazisi zomntwana osebenzisa ukufiphala
1 Ukufiphala okusisiseko ngokubanzi
2 Ukufiphaza okhethekileyo ukuqaqambisa into
3 Siphinda kabini umaleko ophambili
4 Sisebenzisa ukufiphala kweGaussian kumaleko aphindwe kabini
5 Yenza imaski yevektha
6 Fumana ubunzulu usebenzisa ukufiphala
7 Fihla isazisi somntwana usebenzisa ukungaboni
Ukufiphala okusisiseko ngokubanzi
Isiphoso sokuqala esimele ukusilawula sisiseko ngokubanzi apho siya kuwufiphaza wonke umfanekiso ngaphandle kokubenza nzima ubomi bethu kakhulu. Amaxesha amaninzi siya kuba nomdla ekudaleni ubume ngokubanzi ukuze sisuse ukubalasela ngokubanzi emfanekisweni, oku kunokuba luncedo kakhulu kwi ukuyilwa kwemvelaphi yeefoto.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile vula umfanekiso wethu kwi Photoshop.
Nje ukuba umfanekiso uvuleke kufuneka siye kwimenyu ephezulu kwaye sijonge ukhetho Isihluzi seGaussian / blur / blur, Ukucofa le thebhu kuya kuvula iwindow entsha apho sinakho khetha inqanaba lokufiphala esifuna ukuyifaka kumfanekiso.
Ukufiphaza okhethekileyo ukuqaqambisa into
Ukuba sifuna qaqambisa indawo ethile yefoto singayenza sisebenzisa i ukufiphala kweGaussia kodwa ukulandela inkqubo eyahlukileyo.
Siphinda kabini umaleko Nqununu
Sisebenzisa i- ukufiphala kweGaussia kumaleko aphindwe kabini
Sibeka umaleko ongagungqiyo ngezantsi komaleko ojolise
Sisebenzisa i- vector imaski kumaleko ajolise kuwo
La umaleko ojolise ihamba ngaphezulu komaleko ongagxilwe
La ngamanyathelo esiya kuwalandela kolu hlobo lokufiphala, nangona kubonakala ngathi kuyinkqubo elula kakhulu ukuyenza. Makhe siyibone ngcono inyathelo ngenyathelo.
Siphinda kabini umaleko ophambili
Sivula umfanekiso wethu kwi Photoshop kwaye siyayiphinda, emva kokwenza oku into elandelayo ekufuneka siyenzile tshintsha amagama kwimaleko ye sebenza ngendlela ehlelwe ngakumbi, kule meko siza kubiza amagama ngolu hlobo lulandelayo: umaleko kugxilwe, ungqimba ngaphandle koqwalaselo. Kufuneka siqiniseke ukuba umaleko ongagxiliwanga ungaphantsi komaleko ojolise kuwo.
Sisebenzisa ukufiphala kweGaussian kumaleko aphindwe kabini
Sikhetha uluhlu oluphindaphindiweyo olunegama "Umaleko awujoliswanga" kwaye sisebenzisa i Ukukhanya kweGaussia. Ukufaka ukufiphala sibuyele kwiwindow ephezulu ye Photoshop.
Into elandelayo ekufuneka siyenzile yenza i-vector mask kulwahlulo olujolise kuyo (umaleko ongaphezulu) ngale ndlela siza kuzicima iinxalenye zoluhlu lokufumana shiya umaleko osezantsi ubonakala (ngaphandle koqwalaselo) ufumana i isiphumo sokufiphaza kuphela kwiindawo esizicimayo. Yindlela elula yokufaka isicelo Ukufiphaza ngokuchanekileyo.
Yenza imaski yevektha
Ukwenza a vector imaski konke ekufuneka sikwenzile kukuba khetha umaleko ojolise kwaye ucofe i icon ezantsi kweengqimba.
Inkqubo ilula kakhulu into ekufuneka siyenzile kukuyenza dlala ngexabiso lebrashi, Okona kuqhelekileyo kwaye kucetyiswayo kukubeka amaxabiso aphantsi ukuze isiphumo sokungabonakali ngakumbi kwaye sikwazi ukusebenza kancinci kancinci.
Singayenza Iziphumo ezinomdla ukuba endaweni yokusebenzisa ibrashi ukucima iinxalenye zomfanekiso sisebenzisa ithambeka lobuso. Inkqubo yokusebenza iyafana, ekuphela kwento etshintsha kukusetyenziswa kwesixhobo segradient njengoko sinokubona emfanekisweni.
Ukuba sifuna ukufumana ubunzulu bentsimi kusetyenziswa igradient into ekufuneka siyenzile kukusebenzisa a fiphaza kolunye lomaleko kunye nevask mask, yinkqubo enye esele siyenzile kweminye imifanekiso. Inye kuphela into entsha ekufuneka siyenzile kule ndawo kukudala ifayile I-gradient yomgama Ngendlela yokuba ukufiphala kufezekise ukuthambeka okuqhubela phambili.
Fihla isazisi somntwana usebenzisa ukungaboni
Namhlanje kuqhelekile censor iifoto zabantwana ngaphambi kokuzifaka kwinethiwekhi, nokuba Yokhuseleko ngaso nasiphi na esinye isizathu kunomdla ukwazi ezi ntlobo zeziphumo ezinokusinceda ngamanye amaxesha.
Inkqubo ilula kakhulu, konke ekufuneka sikwenzile kukuba uphinda maleko ophambili kwaye ukhethe i Isixhobo semarquee elliptical de Photoshop. Xa isixhobo sinamacandelo, siza kwenza isangqa kubuso bomntwana ukuze kamva sisebenzise ukufiphala kweGaussia Ngendlela efanayo esele sibonile ngaphambili kule post.
Yenza impinda ikapa
Khetha isixhobo isakhelo se-elliptical
Yenza enye ukhetho ebusweni bomntwana
aplicar ukufiphala kweGaussia
Ukufiphala komsebenzi Ifotohop yinto elula kakhulu kwaye ekhawulezayo, konke ekufuneka sikwenzile kukufunda master izixhobo ezininzi ukubonelelwa yinkqubo, kule meko sisebenzise enye yazo kuphela kodwa sifunde ukuqonda iikhonsepthi kunye neendlela zokusebenza esisiseko kwaye iyimfuneko Ukuphinda usebenzise ifoto.
El ubuqili bokuphinda ubambe ifoto nge Photoshop Kukungayazi indlela yokwenza into kodwa dibanisa oko sikwaziyo ngohlobo lokuba sikwazi ukwenza izinto ezintsha. Zive ukhululekile ukuphanda ngenkqubo emva kokufunda into entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Iindlela zobuchule bokufiphaza kunye neFotohop
Iindlela ezilungileyo kakhulu ... zokuziqhelanisa nezinye
IGraffica iphephancwadi ekumele ukuba wonke umyili abe nalo